Pages tagged with: အိမ်မဲ့သူ — HunterThinks.com Pages tagged with: အိမ်မဲ့သူ — HunterThinks.com
Pages tagged with: အိမ်မဲ့သူ
ပြီးခဲ့သည့်အတွက် 26 နာရီ, ငါအများကြီးပြောင်းရွေ့ကြပြီမဟုတ်. ငါတတျနိုငျသသလောက်အိပျပျြော, ဒါပေမယ့်ငါအိပ်မက်ဆိုးခဲ့, ငါ၏အလည်ပင်းနာကျင်, ရှိသမျှကိုငါကျော်မျိုးယားယံခံစားရတယ်. ငါအဆောက်အဦဘေးတွင်မြေပြင်ပေါ်တွင်အိပ်ပျော်နေသောနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတယ်,aguy tried to steal my phone from my . ..
New research proves I must findadifferent medicine. ဒါကြောင့်, I need to do more research while homeless. Plus အား, I explainapotential cause of my medical condition.
I want to doatreatment that has two phases. If it is successful, the possible outcomes range from my symptoms are permanently reduced to I am cured of everything, including my gastrointestinal problems. The first phase takes9သို့ 11 ရက်ပေါင်း. It is the most difficult, and if I don’t have an improvement, the . ..